Archive du 21-janv-2021
Mpanao trafikana volamena Navoaka ny didy fampisamborana iraisam-pirenena
Nambara tao anatin’ny tatitry ny minisitra omaly, fa eo an-dalam-piaraha-miasa
JOE BIDEN NIANTSO FIOMBONANA HO AN’NY AMERIKANINA
Niantso fiombonana ho an’ny Amerikanina I Joe Biden, Filoha Amerikanina faha-46 tamin’ny fihanianany omaly.
DONALD TRUMP “MBOLA HIVERINA EO AHO”
Mbola hiverina eo isika na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana ary vao
OUGANDA-MASOIVOHO AMERIKANINA NORARANA TSY HITSIDIKA NY KANDIDA BOBI WINE
Mihamarefo ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin’I Ouganda sy I Etazonia. Nikasa ny
JACK MA NIPOITRA IHANY
Niverina nipoitra sy niteny ilay mpanefoefo Sinoa Jack Ma telo volana taorian’ny nanakianany
Manavotra sa milalao aim-bahoaka ?
Fomba fiasa sy paikady toa efa hita taratra teto amin’ny firenena nanomboka tany amin’ny tetezamita ny famoronana olana,
Paul Rabary “Tsy hiverina ho minisitra izany aho”
Efa nahavita adidy teto amin’ny firenena aho ka tsy hiverina ho mpikamban’ny governemanta izany,
Fizahan-tany Mampiaka-peo ireo mpiseradia
Anisan'ny sehatr`asa mizaka ny tsy eran'ny aina ary potika tanteraka noho ny
“Plan Marshall” 1043 miliara Ar Firy isan-jaton’ny fampanantenana no tanteraka ?
Ny 15 jona 2020 no nanambaran’ny Filoha Rajoelina ny “Plan Marshall” izay
Tabera Randriamanantsoa “Ny fampihavanam-pirenena ihany no vahaolana”
Anisan` ireo antoko politika nanatrika ny tatitra nataon`ny Vaomiera misahana
Dany Rakotoson “Asa vonjy tavanandro no betsaka eto”
Rehefa tsy fantatra ny nahatonga ny fiakaran’ny vidin’entana dia lasa
Tarif OPTIMA an’ny Jirama Tolotra vaovao hampihenana ny vidin-jiro sy rano
Ao anatin’ny fanatanterahana ny Velirano faharoan’ny Filohan’ny Repoblika dia
Fizarana seza Adino tanteraka i Kaleta
Mba efa saika nahazo toerana avokoa ireo tao anatin’ny Vondrona ARMADA
Ministeran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola « Tsy anay ilay fiaramanidina nitondra ilay volamena »
Nanoloana ny filazam-baovao iraisam-pirenena teo anivon’ny Africaintelligence.fr
Mampanahy ny eny Ankatso Nahitana trangana coronavirus 29
Manomboka miparitaka eny Ankatso ny valanaretina coronavirus, raha ny loharanom-baovao azo.
Antenimierandoholona Hihena ny isan’ny birao maharitra
Araka ny fitsipika vaovao lany eny amin` ny Antenimierandoholona, dia hihena ho
Halatra fiara teny amin’ny 67 ha Nampatoriana tamina zava-pisotro ilay mpamily
Nitrangana halatra mazda iray teny amin’ny 67 ha atsimo ny 10 janoary lasa teo.
Covid-19 Antananarivo Renivohitra Maherin` ny 10 isan`andro no manantona CSB
Manoloana ny fiparitahan'ny tsimokaretina coronavirus dia raisina an-tanana eny
Caravanne du Sud Tonga any Taolagnaro ireo sakafo
Vary, menaka, voamaina ary rano no nentin` ny “caravanne du Sud” izay niainga
Nofo mangatsiakan’i Goly be Ho tonga eny Ivato amin’ny alahady
Ny alahady ho avy izao no ho tonga eny amin’ny seranam-piaramanidin’Ivato ny